Umehluko phakathi kwe-Hydraulic Dredging & Mered Dredging
Meering Dredging vs Hydraulic Dredging
Ngabe uzama ukuthola ukuthi ukudonsa ngemishini noma ukudonsa kwe-hydraulic kufaneleke kangcono ukufeza izidingo zakho zasemayini? Abanye abagqugquzeli bangaphikisana nokuthi inqubo yokuqinisa okwesikhashana inqubo eyinkimbinkimbi inqubo elula futhi eyinkimbinkimbi yabasebenzi. Kodwa-ke, i-hydraulic dredging isebenza kahle, inikezela ukuguquguquka okuthe xaxa, futhi ilungele kangcono izindawo eziyinselele lapho abembayo bekulinganiselwe. Ngaphezu kwalokho, ukugawulwa kwe-hydraulic kungcono ezindaweni lapho kudingeka khona ukuthola izinto zokwakha kahle.
Kunezindlela ezingaphezu kweyodwa zokuphinda dredging. Ekugcineni, isinqumo sakho mhlawumbe sizocabanga ukuthi sizobiza malini nokuthi sizothatha isikhathi esingakanani ukuqedela iphrojekthi yakho yokwakha kabusha. Kodwa-ke, kunezinye izici ongafuna ukuzicabangela. Uzofuna nokuhlola umzimba wamanzi osebenza kuwo nokuthi ukukhetha uhlobo olufanele lwemishini yokudonsa kungakusiza kanjani ukufeza izinhloso zakho zokwehlisa umoya.
Ukudonswa phansi ngomshini kulungele kangcono indawo enendawo eyanele yokufukula umgodi, okuvumela umshini oqhutshwa amandla ukukhipha, ukulahla, kanye nezinto zokwakha ngokushesha.
Amaphrojekthi we-Mearing dredging ngokuvamile atholakala eduze nolwandle. Ngokwesiko badinga izingcezu eziningana zemishini yokusekela kufaka phakathi umgodi oyisisekelo osusa ngomshini isihlabathi namanzi ebeka isihlabathi ogwini, abalayisha ukuhambisa isihlabathi ogwini, namaloli ukufaka isihlabathi endaweni yokusebenzela eseduze.
I-hydraulic dredge eyodwa ingasetshenziswa ukufeza ukuthunywa okufanayo engxenyeni yesikhathi usebenzisa izinsiza ezimbalwa. Ezinye izinzuzo zokuqothula kwe-hydraulic zihlanganisa:
Ukwehliswa kwezindleko zabasebenzi nezindleko ezinkulu
Amandla amancane nokukhipha
Izinto zokwenziwa ezincishisiwe nezindleko zokulungisa
Kuphephile futhi kuyasebenza
Ngesikhathi sokudonswa kwe-hydraulic, izinhlawulo zigezwa esihlabathini ngenkathi zithunyelwa ngqo endaweni yokuhlunga eseduze. Lapho ukukhuphuka kwebanga noma ukuphakama mpo kukhuphuka, iphampu yokuqinisa amandla kungasebenza njengenketho efanelekayo yokusiza ukwandisa ithuba lokulinganisa okungaguquki kwamanani.
Enye yezinzuzo ezengeziwe zokudonswa kwe-hydraulic kufaka phakathi ukudluliswa okuqondile kwezinto ekusetshenzisweni kwesitshalo. Lokhu konga isikhathi nemali, kuqeda isidingo sabasebenzi abengeziwe kanye nokuphathwa kabili kwendaba.
Ukukhetha Izinsizakusebenza Ezifanele Zokudonsela Umsebenzi
Amanzi we-Hydraulic dredges zilungele kangcono izidumbu ezinkulu zamanzi lapho abembi bekunzima ukufinyelela izinto zokwakha futhi kwesinye isikhathi izimo zemvelo zibandayo. Ukumbiwa phansi nge-hydraulic dredge kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokukhipha izinto zokwenziwa njalo, kungakhathaleki ukuthi zinesihlabathi, udwala, noma idiphozi kasawoti enzima.
Ama-hydraulic dredges ka-Ellicott alungele amaphrojekthi wezimayini. Lokho kungenxa yokuthi ama-dredges aklanyelwe ukunciphisa izindleko ngethani ngalinye futhi athuthukise umkhiqizo. Ama-dredges amakhulu ka-Ellicott ayatholakala kulawo maphrojekthi adinga ukumba ukujula kuze kufike kuma-60 '(18 m).
Izakhiwo zethu zisetshenziswe emhlabeni wonke emisebenzini ehlukahlukene yezimayini kusuka eSt. Petersburg, eFlorida (USA) kuya esifundazweni saseMarinduque ePhilippines. Ukuze uthole izincomo zokwehlisa idili, qedela eyethu ifomu leprojekthi namuhla noma uxhumane nathi nge-imeyili ku-tengiso@dredge.com.